Voamarina: ny rafitry ny fiara miady amin'ny fiara mialoha ny fianjeran'ny fiaramanidina Etiopiana Max
Home » Lahatsoratra farany farany » Fiarovan-tena amin'ny loza sy loza » Voamarina: ny rafitry ny fiara miady amin'ny fiara mialoha ny fianjeran'ny fiaramanidina Etiopiana Max
Airlines • Airport • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Vaovao • Safety • Fitaterana • Travel Wire News • malaza ankehitriny
Voamarina fa ny mpikaroka dia namaritra ny rafitra anti-stall mandeha ho azy araka ny nampandehanana talohan'ny fianjeran'ny fiaramanidina Ethiopian Airlines Boeing 737 Max.
Ity fanapahan-kevitra voalohany ity dia mifototra amin'ny fampahalalana avy amin'ny angon-drakitra sy ny fandraisam-peo ataon'ny fiaramanidina, izay mampiseho fa ny rafitra mandeha ho azy tsy mandeha amin'ny lalana dia mety ho tompon'antoka tamin'ny fianjerana mahafaty tamin'ny 10 martsa.
Ity fanapahan-kevitra mialoha ity dia nampahafantarina nandritra ny fampahalalana natao tao amin'ny US Federal Aviation Administration (FAA) omaly. Fantatra ihany koa fa ny rafitra manohitra ny fivarotana fiara no nahetsika tamin'ny fianjerana jetiona Lion Air 737 Max.
Ny valim-pikarohana vonjimaika dia azo averina novaina, fa amin'izao fotoana izao dia manondro ny rafitra antsoina hoe MCAS (na Maneuvering Characteristics Augmentation System) izy ireo mety ho anton'ny fianjerana roa. Nilaza ny mpandamina fa narahin'ny fiaramanidina Ethiopian Airlines Max a làlan'ny sidina mitovy amin'izany mankany amin'ny sidina Lion Air, ao anatin'izany ny fiakarana sy fidinana misavorovoro alohan'ny fianjerana minitra aorian'ny fiainganana.
Ny rafitra MCAS dia natao hanondroana ho azy ny oron'ny fiaramanidina raha mahatsapa fa mety hisy fatiantoka, na kiheba aerodynamika. Ny fiaramanidina dia mety hahavery ny fisondrotana avy amin'ny elany ary hianjera avy eny amin'ny lanitra raha manondro avo loatra ny orona. Ny rafitra koa dia mahatonga ny Max manidina mitovy amin'ny taranaka taloha an'ny Boeing's 737, mandà ny filàna fiofanana ho mpanamory fiaramanidina fanampiny.
Boeing dia miasa amin'ny fanavaozana ny lozisialy ho an'ny rafitra anti-stall auto ka hidina indray mandeha monja ny orona fa tsy tokony ho in-21 toy ny nitranga tamin'ny fianjeran'ny Lion Air izay manamora kokoa ny fanamian'ny mpamily.
Andrasana ny famoahana ny tatitra savaranonando atsy ho atsy ireo tompon'andraikitra etiopiana.
Ny 737 Max 8 dia napetraka manerantany noho ny fianjerana satria miasa amin'ny fanavaozana ny rindrambaiko ny Boeing mba hahatonga ny fiaramanidina ho azo antoka.